အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ဆိုပြီး ကောလဟာလတွေအပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ တိုင်ရွန် – Zartiman
အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်နဲ့ ဆိုပြီး ကောလဟာလတွေအပေါ် တုံ့ပြန်လိုက်တဲ့ တိုင်ရွန်
Zar Ti Man | September 13, 2020 | Celebrity | No Comments
တိုင်ရွန်ကတော့ ပြီးခဲ့တဲ့လကလည်း ယုန်လေးရဲ့ ကိစ္စ နဲ့ ပက်သတ်ပြီး ပရိသတ်တွေရဲ့ ဝေဖန်ပြောဆိုမှုကို ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခံခဲ့ရသလို လက်ရှိမှာလည်း အိမ်ထောင်ရှိအမျိုးသမီးနဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေရှိတယ်ဆိုပြီး လူမှုကွန်ယက်ကနေ တိုက်ခိုက်ခံနေရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ တိုင် ရွန်ကတော့ သူ့ဘက်က အမှန်တရား ကို အရိုးသားဆုံး ပြောခဲ့ပြီးပြီမို့ ပရိသတ်ကြီးလည်း စိတ်ရှင်းသွားလောက်ပြီ ထင်ပါတယ်နော်။
ဖတ် ရှုပေးကြတဲ့ပရိသတ်ကြီးအားလုံးလည်း သာယာပျော်ရွှင်တဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ မင်းသားချော တိုင်ရွန် ကတော့ ဆွဲဆောင်မှုရှိတဲ့ ရုပ်ရည်၊ စတိုင်လ်ကျကျ ဝတ်ပုံစားပုံတို့ကြောင့် မိန်းကလေးပရိသတ်တွေကြားမှာ ရေ ပန်းစားအောင်မြင်သူတစ်ယောက်ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိပိုင်ဆိုင်နေတဲ့ မင်းသားတစ်လက်ပီပီ။
ဝေဖန်တိုက်ခိုက်မှုတွေ များစွာ ကို ခံရလေ့ရှိတဲ့ တိုင်ရွန်က ဒီနေ့မှာလည်း အိမ်ထောင်ရှိ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ရဲ့ စပွန်ဆာယူတယ်ဆိုပြီး သွားပုပ်လေလွင့် ပြောဆိုခံနေ ရတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ထိုကိစ္စနဲ့ ပက်သတ်ပြီး တိုင်ရွန်ကတော့ မဟုတ်တာတွေ မပြောကြဖို့ အနူးအညွတ် တောင်းပန်လာပါတယ်။မဟုတ်ပဲမတင်ပါနဲ့ဗျာ။ မိသားစုတွေပျက်စီးမယ်။ ကျွန်တော့် ကိုပဲပြောပါ။ မသေချာပဲပြောတာမကောင်းပါဘူး။
ကျွန်တော် ဘယ်တော့မှ သူများ မိသားစုပြိုကွဲအောင်၊သူများ သားမယားစိတ်နဲ့တောင်မပြစ်မှားဖူးပါဘူး။အားလုံး ဝဋ်ကြွေးတွေရှိလဲ ကျေ ပါ စေတော့ဗျာ တောင်း ပန်ပါတယ်။ မဟုတ်တာတွေ မပြောကြ ပါနဲ့တော့။ ကျွန်တော်အရမ်းပင်ပန်းနေပါပြီ. ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီ။ တောင်းပန်ပါတယ်။ ကျွန်နော် ဘယ်လိုလုပ်ပေးရင် ကျေနပ်နိုင်မလဲဗျာ ” ဆိုပြီး တိုင်ရွန်က သူ့ရဲ့ ဖေ့စ်ဘုတ်မှာ ပြောထားပါတယ်။
Source: Tyron Bejay’s fb
တိုငျရှနျကတော့ ပွီးခဲ့တဲ့လကလညျး ယုနျလေးရဲ့ ကိစ်စ နဲ့ ပကျသတျပွီး ပရိသတျတှရေဲ့ ဝဖေနျပွောဆိုမှုကို ပွငျးပွငျးထနျထနျခံခဲ့ရသလို လကျရှိမှာလညျး အိမျထောငျရှိအမြိုးသမီးနဲ့ ဇာတျလမျးတှရှေိတယျဆိုပွီး လူမှုကှနျယကျကနေ တိုကျခိုကျခံနရေတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ တိုငျ ရှနျကတော့ သူ့ဘကျက အမှနျတရား ကို အရိုးသားဆုံး ပွောခဲ့ပွီးပွီမို့ ပရိသတျကွီးလညျး စိတျရှငျးသှားလောကျပွီ ထငျပါတယျနျော။
ဖတျ ရှုပေးကွတဲ့ပရိသတျကွီးအားလုံးလညျး သာယာပြျောရှငျတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျ။ မငျးသားခြော တိုငျရှနျ ကတော့ ဆှဲဆောငျမှုရှိတဲ့ ရုပျရညျ၊ စတိုငျလျကကြ ဝတျပုံစားပုံတို့ကွောငျ့ မိနျးကလေးပရိသတျတှကွေားမှာ ရေ ပနျးစားအောငျမွငျသူတဈယောကျပဲ ဖွဈပါတယျ။ အောငျမွငျမှုတှေ ရရှိပိုငျဆိုငျနတေဲ့ မငျးသားတဈလကျပီပီ။
ဝဖေနျတိုကျခိုကျမှုတှေ မြားစှာ ကို ခံရလရှေိ့တဲ့ တိုငျရှနျက ဒီနမှေ့ာလညျး အိမျထောငျရှိ အမြိုးသမီးတဈယောကျရဲ့ စပှနျဆာယူတယျဆိုပွီး သှားပုပျလလှေငျ့ ပွောဆိုခံနေ ရတာပဲ ဖွဈပါတယျ။ ထိုကိစ်စနဲ့ ပကျသတျပွီး တိုငျရှနျကတော့ မဟုတျတာတှေ မပွောကွဖို့ အနူးအညှတျ တောငျးပနျလာပါတယျ။မဟုတျပဲမတငျပါနဲ့ဗြာ။ မိသားစုတှပေကျြစီးမယျ။ ကြှနျတေျာ့ ကိုပဲပွောပါ။ မသခြောပဲပွောတာမကောငျးပါဘူး။
ကြှနျတျော ဘယျတော့မှ သူမြား မိသားစုပွိုကှဲအောငျ၊သူမြား သားမယားစိတျနဲ့တောငျမပွဈမှားဖူးပါဘူး။အားလုံး ဝဋျကွှေးတှရှေိလဲ ကြေ ပါ စတေော့ဗြာ တောငျး ပနျပါတယျ။ မဟုတျတာတှေ မပွောကွ ပါနဲ့တော့။ ကြှနျတျောအရမျးပငျပနျးနပေါပွီ. ဒီလောကျဆိုလုံလောကျပါပွီ။ တောငျးပနျပါတယျ။ ကြှနျနျော ဘယျလိုလုပျပေးရငျ ကနြေပျနိုငျမလဲဗြာ ” ဆိုပွီး တိုငျရှနျက သူ့ရဲ့ ဖစျေ့ဘုတျမှာ ပွောထားပါတယျ။
အတွင်းသား အလှတွေပေါ်လွင်အောင် ပြသလိုက်တဲ့ Xmue Xmue
ကြွေလောက်တဲ့ဖက်ရှင်နဲ့ သိမ်မွေ့စွာ သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ မမဆောင်းရဲ့ နောက်ဆုံးထွက်ဗီဒီယို
မို့မောက် ပြည့်တင်း နေတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အလှတွေ နဲ့ ပုရိသ တွေကို ဖမ်းစား လိုက်ပြန် တဲ့ မေပန်းချီရဲ့ ဗီဒီယို
ပုရိသတွေကို ရင်ခုန်အောင် ဆက်ဆီကျကျ ဖမ်းစားလိုက်တဲ့ မရမ်ဆိုင်းနူး